Kulankii Baarlamaanka oo maanta lagu kala tagay iyo Xildhibaanada qaar oo Buuq sameeyay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kulankii Baarlamaanka oo maanta lagu kala tagay iyo Xildhibaanada qaar oo Buuq sameeyay
20th February 2016 MAREEG Af Soomaali 0
Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ku yeelan lahaayeen xarunta Golaha Shacabka kadib markii ay kulanka soo xaadiri waayeen Wasiirka Amniga Gudaha iyo Taliyaha Nabad Sugida oo maanta la filayay in ay Baarlamaanka hortagaan.
Kulanka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo maanta soo xaadireen Xildhibaano gaaray 146-Xildhibaan , ayaa Gudoonka Baarlamaanka Soomaaliya waxa uu Xildhibaanada ku wargaliyay in Wasiirka Amniga uu usoo qoray Warqrad uu ku wargalinayo in uusan maanta Baarlamaanka hor imaan karin.
Warqada uu usoo diray Wasiirka Amniga Gudaha Mudane C/risaaq Cumar Maxamed, ayuu Baarlamaanka kaga codsaday in ay waqti siiyaan uuna Baarlamaanka hor imaan doono waxii ka dambeeyay 25-ka bishan oo ah xiliga ay fasaxa galayaan Baarlamaanka.
Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa bilaabay in ay buuqaan kana hor yimaadana warqada codsiga uu usoo diray Wasiirka Amniga, waxa ayna Xildhibaanada diideen in ay guda galaan Ajandayaasha kale ee kulanka, iyagoona ku adkeestay in aysan ajando kale ka hadleyn ilaa Wasiirka Amniga iyo Taliyaha Nabad Sugida ay ka hor yimaadaan Baarlamaanka.
Qaar kamid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku eedeeyay Gudoonka Baarlamaanka in ay uga baxeen balantii aheed in maanta ay Baarlamaanka hor yimaadaan Wasiirka Amniga iyo Taliyaasha Nabad Sugida iyo Booliiska.
Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta isku soo diyaarinayay in ay su’aalo adag oo ku aadan Xasaanada iyo amniga ay weediiyaan Wasiirka Amniga Gudaha iyoTaliyaasha Ciidanka , waxa ayna Xildhibaanada markii dambe kala dareereen xarunta Baarlamaanka iyada oon la guda galin ajando kale.